IPrincess Eugenie kunye noJack Brooksbank Fudukela eFrogmore Cottage Ngomntwana - Indumasi
Eyona Indumasi Ngaba iPrincess Eugenie ibuyele eFrogmore Cottage?
Ngaba iPrincess Eugenie ibuyele eFrogmore Cottage?
UPrincess Eugenie noJack Brooksbank bashiye isibhedlele saseLondon ePortland kunye nonyana wabo osanda kuzalwa kule veki.Karwai Tang / WireImage
Kube lixesha elonwabisayo kakhulu kwasebukhosini, ngeendaba ezimnandi zosana. UPrincess Eugenie noJack Brooksbank bamkele umntwana wabo wokuqala, oyinkwenkwe, ekuqaleni kwenyanga, kwaye kwiintsuku nje kamva, iNkosana uHarry kunye noMeghan Markle babhengeze ukuba balindele umntwana wabo wesibini .
UPrincess Eugenie wazalelwa ePortland Hospital eLondon ngoFebruwari 9, kwaye kule veki, yena noJack bagoduka nosana lwabo olusandul 'ukuzalwa. Esi sibini ngaphambili Ukuhlala kwikhaya labazali bakaEugenie, eRoyal Lodge , kodwa kubonakala ngathi ngoku bayintsapho yabathathu, baye babuyela eFrogmore Cottage.
Bhalisa kwi-Royals Newsletter ye-Braganca INkosana uHarry kunye noMeghan Markle bakuvuyela ukuboleka uPrincess Eugenie noJack Brooksbank ngokusetyenziswa kweFrogmore CottageUBen Birchall - Iphuli yeWPA / imifanekiso kaFetty
Ithumela imbewu ye-cannabis kuthi
Sele beqhelile kwilifa laseWindsor, njengoko uPrincess Eugenie noJack baqale bafudukela eFrogmore Cottage malunga noNovemba wonyaka ophelileyo. I-duo ixelwe Ndenze amalungiselelo abucala neNkosana uHarry kunye noMeghan Markle (uFrogmore uhlala kwindawo yokuhlala yase-Sussex yase-UK), apho u-Eugenie noJack baya kuhlala kwikhaya lasebukhosini njengoko babelungiselela ukufika komntwana wabo wokuqala.
INkosana uHarry kunye noMeghan ngebabonwabile ukwamkela iPrincess Eugenie noJack kwikhaya labo lase-UK, kwaye ipropathi yayisele ilungele usana olusandul 'ukuzalwa, njengoko abakwaSussex babelilungise kakhulu ifa ngaphambi kokuzalwa kuka-Archie. Ikhaya linjalo Imizuzu nje kude neNqaba yaseWindsor , phi Ukumkanikazi uElizabeth kunye neNkosana uPhilip Bachithe uninzi lwe-coronavirus yokutshixa, kunye nokusondela kufutshane neRoyal Lodge, apho kuhlala iPrince Andrew kunye noSara Ferguson.
E, UPrincess Eugenie noJack bagqiba kwelokuba bafuduke eFrogmore Cottage emva kweeveki nje ezintandathu , kwaye endaweni yoko wabuyela kubazali bakaEugenie.
Iposi elabiwe nguPrincess Eugenie (@princesseugenie)
Ngoku, nangona kunjalo, uPrincess Eugenie noJack babuyile eFrogmore Abantu , ngelixa beqhuba besiya ngqo eWindsor ukusuka ePortland Hospital nonyana wabo kule veki. U-Eugenie noJack bahlala kufutshane kakhulu neDuke kunye neDuchess yaseYork, kodwa ngoku banendawo yabo kunye nosana lwabo olusandul 'ukuzalwa, olunokubaluleka kakhulu phakathi kwesithintelo sengculaza kunye nesithintelo sokutshixiza.
I-Frogmore Cottage iseKhaya elisemthethweni likaPrince Harry noMeghan e-U.K, nangona abakwaSussex, ngoku abahlala eMontecito, eCalifornia, bengakhange bakwazi ukubuyela kwilifa laseWindsor phantse unyaka. INkosana uHarry, Nangona kunjalo, kulindeleke ukuba ndibuyele ngaphesheya kwechibi ngeli hlobo , ngexesha leTrooping the Colour ngokunjalo nokutyhilwa komfanekiso oqingqiweyo embekweni kaPrincess Diana eKensington Palace.
Abagxeki bakaMiley Cyrus 'Isipili esimnyama' Isiqendu Abangayiboni Lo nguCharlie Brooker kwindawo yakhe eNgcono
Njani uWarren Buffett, abanye abantu abazizigidi ngezigidi ngezigidi
Iinkonzo kunye neengozi zokuDibana noMhlobo ngamnye we-Myers-Briggs
'Bamba kwaye Bamba umlilo' Ixesha le-3 yeNkulumbuso: Ndishiye ubugcisa bam eSan Francisco
Uluhlu lweefilimu zomculo ezibhalwe ngo-2016
sarah jessica parker umbala weenwele
Ndixakwe sisigidi seedola ze9
Ezona pilisi zokutya zintle kumanqatha esisu
Ngubani inombolo yeselfowuni yile
uhlaselo lwe-titan imperialist propaganda
ukuthandana sites kubantu abatshatileyo